Valves, Fittings and Tubing PARKER HANNIFIN (THAILAND) CO., LTD.
August 27, 2018, 10:43 pm / collin8db6n.ampedpages.com
Parker Autoclave အင်ဂျင်နီယာများသည် မြင့်မားသည့်ဖိအား၊ ပြင်းထန်သောအပူချိန်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိသော ဘားခလုပ်များ အထိုင်ချခြင်း ပြွန်ပိုက်များတပ်ဆင်ခြင်းများကို တီထွင်နေကြပါသည်။ဖိအား 150000 psi ထိခံနိုင်ရည်ရှိသော (10, 342bar)
Parker Hannifin (Thailand) Co., Ltd. Parker Hannifin ကုမ္မဏီ ဟာရွှေလျားသွားလာမှုဆိုင်ရာ နည်းပညာပိုင်းတွင် အောင်မြင်ကျော်ကြားနေသော ကမ္ဘာထိပ်တန်းဝင်ခေါင်းဆောင် ၂၅၀ က ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားသော ကုမ္မဏီ တခုဖြစ်ပါသည်။ နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ တိုင် စက်ရုံသုံးပစ္စည်းမျိုးစုံ ထုတ်လုပ်သည့် ဈေးကွက်တွင် သုံးစွဲသူများ၏ လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးရုံသာမက ယုံကြည်မှုကိုပါ အောင်မြင်စွာ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သော ကုမ္မဏီတခုဖြစ်ပါသည်။ Parker မှ ထုတ်လုပ်တဲ့ စက်ရုံသုံးပစ္စည်းများကို နေရာတော်တော်များများတွင် တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ အရည်အသွေးမြင့် အင်ဂျင်နီယာပိုင်းဆိုင်ရာ စက်ပစ္စည်းများနှင့်oil and gas, Constructing, life science, Power generation နှင့် Industrial Machinery များအတွက် အဆင့်မြင့် နည်းပညာ အသုံးပြု၍ ထုတ်လုပ်ထားသော ပစ္စည်းများကို ဈေးကွက်အလိုက် ဖြန့်ဖြူးလျက် ရှိပါသည်။ Parker Hannifin(Thailand) ကို ၁၉၉၇ တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံရှိ စက်ရုံခွဲများတွင်, Motion system(hydraulic, pneumatic, electromechanical, SSD Drive), Filtration, Fluid connectoမ, Instrumentation, Engineered materials ဟူ၍ အဖွဲ့(၅)ဖွဲ့ခွဲ ကာ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်းသာမက ဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်းများကိုလည်း လုပ်ဆောင်နေပါသည်။ Parker Hannifin Co,Ld ၏ ထိုင်းနိုင်ငံဖြန့်ဖြူးရေးကွန်ယက် များသည် မြန်မာနိုင်ငံသိုရောက်ရှိနိုင်ပြီး အပိုပစ္စည်းမျိုးစုံသာမက ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း ဝန်ဆောင်မှုများကိုပါ ဆောင်ရွက်ပေးနေပါသည်။ အချိန်နေရာမရွေး Parker Hannifin Co,Ldသည် သုံးစွဲသူအကျိုးကိုသာ ရှေးရှူကာ လိုအပ်သော ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကိုထောက်ပံပေးးလျက် ရှိပါသည်။ Parker Hannifin Co,Ld ၏ ထိုင်းနိုင်ငံဖြန့်ဖြူးရေးကွန်ယက် များသည် မြန်မာနိုင်ငံသိုရောက်ရှိနိုင်ပြီး
Valve , Filter, Air Filter, Oilo Filter, Pre Filter, Industrial Hydraulics, Filtration, Hydraulic Filter, Lab Gas Generator Nitrogen, Hygrogen Zero Air, Process Filter Housing, Compressed Air Dryer and Gas , Hydraulic Hose, Industrial Hose, Air Hose, CNG Hose, Fitting, Pneumatic, Gear Pump Hydraulic, Motor Hydraulic, Denision, Piston, Cylinder, Accumulator, Solenoid Valve, Hydraulic Pump, Hydraulic Valve, Seal, Regulator, try this out Instrumentation Process Control, Electromechanica.
Parker Hannifin (Thailand) was established in 1997 and has seven product groups
Pneumatic, Electromechanical, Climate Controls, Fluid Connector, Filtration, Hydraulic, Process Control, Seal, Adhesive and Sealant
Automation, Hydraulics, Filtration, Fluid and Gas Handling, Climate Control Process Control and Sealing & Shielding, Parker Thailand hasawide distribution channel across the country.
1265 Rama9Rd., Suanluang, Suanluang , Bangkok 10250
Comments on “Valves, Fittings and Tubing PARKER HANNIFIN (THAILAND) CO., LTD.”